Dhageyso:-Guddoomiye Waaxeed sheegay in la afduubtay qaar kamid ah ilaaladiisa - Radio Risaala: Somali News Online
Home AUDIO Dhageyso:-Guddoomiye Waaxeed sheegay in la afduubtay qaar kamid ah ilaaladiisa
Dhageyso:-Guddoomiye Waaxeed sheegay in la afduubtay qaar kamid ah ilaaladiisa
Guddoomiyaha Waaxda Afaraaad degaanka Garasbaaleey ee duleedka Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in rag hubeysan ay afduubteen laba kamid ah ilaaladiisa xilli ay ku sugnaayeen deegaankaas.
Maxamuud Xaashi Cali oo la soo xiriiray Radio Risaala ayaa sheegay in rag hubeysan oo watay Gaari nooca raaxada ah ay wateen laba askari oo kamid ahaa ilaaladiisa oo mid kamid ah hubeysnaa meel u dhow Xerada Asluubta e Waaxada Afaraad ee Garas baaleey.
Waxaan wax ka weeydiinay dadka uu ku tuhmayo inay labada askari afduubteen ayuu sheegay in ilaa iyo hadda aysan jirin cid uu ku tuhmayo ama uu og yahay inay ka dambeysay, hayeeshee baaritaan ay u galayaan.
Waa mid kamid ah dhacdooyinka ku cusub dalka sanadihii ugu dambeeyay, iyada oo ay jiri jirtay in dad aan hubeysneyn la afduubtay ehelkoodana lacago la weeydiisto.
Previous articleDilalka Dhallinyarada Soomaalida oo kusii kordhaya Sweden
Next articleGalmudug oo faah faahisay dagaalka ka dhacay gobolka Galgaduud
Wararkii ugu dambeysay Qarax caawa laga maqlay Muqdisho
Madaxweynaha Galmudug oo Kormeeray Xarunta loo Dhisayo Madaxtooyada
Farmaajo oo la kulmay Xukuumadda Cusub
Wariyeyaasha Soomaaliyeed oo dhigay banaanbax ay ku dalbanayeen sii deynta Wariye Caddow
UK oo dib ugu soo celinaysa Soomaaliya wiil Soomaaliyeed
Somaliland oo mamnuucday in dadka Soomaaliya ka socdaa somaliland u yimaaddaan ka qayb-galka siminaarrada
DHAGEYSO: Warka Habeen 16-10-2020
Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax Caawa ka dhacay agagaarka Isgoyska KM-4 ee wadada maka Al-mukarama. Qaraxaas ayaa waxaa la sheegayaa inuu ahaa miino...